Su'aalaha la isweydiiyo - Nanchang Weiti Technology Co., Ltd.
Muunadaha, waqtiga hogaamintu waa qiyaastii 7 maalmood. Soosaarka baaxadda leh, waqtiga hogaamintu waa 20-30 maalmood ka dib marka la helo lacag-dhigashada. Waqtiyada hogaamintu waxay wax ku ool noqdaan marka (1) aan helnay deebaajigaaga, iyo (2) aan u haysanno oggolaanshahaaga ugu dambeeya ee alaabtaada. Haddii waqtiyada hoggaamineed aysan ku shaqeyn waqtigaaga kama dambaysta ah, fadlan ka gudub shuruudahaaga iibintaada. Xaaladaha oo dhan, waxaan isku dayi doonaa inaan daboolno baahiyahaaga. Xaaladaha badankood, waan awoodnaa inaan sidaas yeelno.
Haa, waxaan had iyo jeer isticmaalnaa baakadaha dhoofinta oo tayo sare leh. Waxaan sidoo kale u adeegsanaa xirxirida halista khaaska ah alaabada halista ah iyo kuwa xamuulka kaydinta qabow ee la ansixiyay ee loogu talagalay walxaha xasaasiga ah. Baakadaha takhasuska leh iyo shuruudaha xirxirida ee aan caadiga ahayn ayaa laga yaabaa inay qaadaan kharash dheeraad ah.
Qiimaha dhoofintu waxay ku xiran tahay habka aad u dooratid inaad alaabta u hesho. Express caadi ahaan waa kan ugu dhaqsaha badan laakiin sidoo kale habka ugu qaalisan. Badda dhexdeeda ayaa ah xalka ugu fiican qaddar badan. Qiimaha xamuulka sida saxda ah waxaan ku siin karnaa oo kaliya haddii aan ognahay faahfaahinta xaddiga, miisaanka iyo habka. Fadlan nala soo xiriir wixii macluumaad dheeraad ah.
Miyaad bixisaa adeeg summad khaas ah?
Haa, waxaan ku habayn karnaa astaantaada gaarka ah alaabooyinka iyo baakadaha. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad noo soo dirto farshaxanka astaantaada, sida caadiga ah asalka farshaxanka Adobe Illustrator iyo farshaxanka PDF ayaa sida ugu fiican wax uga qaban doona daabacaadda.
Iibiyeyaasha Indhaha, Kordhinta Indhaha, indho -dejiye, dibinta, jeedal mink, Jeexa indhaha,